अब ४० वर्ष मुनिका महिला परिवारको सहमति र वडाको सिफारिस विना विदेश जान नपाइने – Ap Nepal
अब ४० वर्ष मुनिका महिला परिवारको सहमति र वडाको सिफारिस विना विदेश जान नपाइने
काठमाडौं, २८ माघ । अब ४० वर्षमुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश भ्रमणमा जाँदा परिवारको सहमति र वडाको सिफारिस अनिवार्य चाहिने भएको छ। अध्यागमन विभागले कार्यविधि २०६५ को भिजिट भिसा सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार ४० वर्षमुनिका महिलाहरू अब एक्लै विदेश वडा कार्यालयको र पारिवारिक सहमति विना जान नपाइने भएको छ ।
विभागका अनुसार पीडामा परेको महिलाहरुलाई उद्धार गर्न सजिलो बनाउनका लागि कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । यसले मानव तस्करी, शोषणमा जस्ता समस्यामा परेका महिलाहरुलाई उद्धार गर्न सजिलो हुने जनाइएको छ । कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव तीन दिनअघि गृह मन्त्रालयमा पठाएको विभागले जनाएको छ। यो कार्यविधि चाँडै लागू हुने बताइएको छ ।
हालको कार्यविधिको दुरुपयोग भएको र महिलाहरू थप शोषणमा नपरून् भनेर कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको विभागका महानिर्देशक रमेश केसीले बताए। ‘यो अहिले गृहमन्त्रालयमा विचाराधीन छ, तर हालको कार्यविधिले महिलाहरूलाई जोखिममा पारेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो,’ केसीले भने। ४० वर्षमुनिका महिला परिवारका सदस्य वा श्रीमानसँग भ्रमणमा जाँदा भने पालिकाको सिफारिस र बिमा अनिवार्य छैन। Source:khabarhouse
Prevनेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस आज यस्तो छ बिनिमय दर ….
Nextमेरी बास्सैकी मुइयाको श्रीमान सहितको रमाइलो क,मेडी, तर आमा गुमाउँदाको पि:डा सʼम्झेर भाबुʼ क (भिडियो सहित)
अन्ततः राहुल र स्मिताको पुनर्मिलनले छायो परिवारमा खु:शि- हेर्नुहोस (भिडियो सहित)